faallooyinka suuqyada FXCC Blog
Posts Tagged 'faallooyinka suuqa'
Xawaaraha Terminal, IMF iyo Goldman Sachs Do Math
Sep 19, 11 • 4840 Views Faallooyinka Suuqa • 1 Comment
Tobanka bangi ee ugu waawayn Jarmalka waxay u baahan yihiin € 12706 bilyan oo euro oo ah suuq weyn oo dheeraad ah wargeyska Jarmalka Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung ayaa weriyay sabtidii, taasoo ka soo xigatay daraasad ay soo saartay machadka dhaqaalaha ee DIW. Wargeyska ayaa soo xigtay Dorothea Schaefer, a ...
Sep 19, 11 • 1937 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Fudud ee Fikirka
Sep 15, 11 • 3565 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Magaca Bond, Eurobond
Haddii Midowga Yurub uu burburo waxa xiga ee soo socda?
Sep 14, 11 • 3644 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Haddii Midowga Monetary Union burburiyo waxa xiga ee soo socda?
Waxaa ka mid ah astaamaha dad badan oo badan oo naga mid ah oo naga mid ah naga hela nasiib-darraynaya inaan dhahno "Waxaan idiin sheegayaa" waa inay sarreeyaan. Dhegeysiga, ama akhrinta faallooyinka ka soo horjeeda muddada dheer ee Midowga Yurub, oo hadda ku cadaadinaya shan iyo siddeed ...
Sep 14, 11 • 7098 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Kick u galay cawska dheer, ka dibna laad, ka dibna ku aasaa
Sep 13, 11 • 4156 Views Faallooyinka Suuqa • 1 Comment
Isbeddelka dhaqaale iyo habka caadiga ah
Sep 13, 11 • 5847 Views Faallooyinka Suuqa • 3 Comments
Golaha Wakiilada Mareykanka ayaa ku qiyaasaya in dagaalka uu ka dhacay Afgaanistaan ​​tan iyo markii '911' uu ku kaca ku dhowaad $ 450. Lacagtaasi waxay u dhigantaa in la keeno nin waliba Afgaanistaan, haween iyo ilmo $ 15,000. Lacagtaasi waxay sidoo kale tahay 10 sano oo dakhli ah oo celcelis ahaan ah Afqaanistaan, ...
Waad ogaan kartaa qaar ka mid ah dadka wakhtigaa, laakiin weligaa marnaba ma siri doonin suuqyada oo dhan
Sep 9, 11 • 3467 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Waxaad qallooci kartaa qaar ka mid ah dadka qaar ka mid ah waqtiga, laakiin marnaba foolin doonaa suuqyada oo dhan waqtiga
Qofka miyuu "xisaab" samayn karaa maadaama madaxweyne Obama uu ku booriyay Congress? Sidee ayaad u abuuri kartaa toban milyan oo shaqooyin ah oo ka lumay Maraykanka tan iyo 2007 oo leh $ 447 bilyan doolar? Sidee ayaad u soo jiidi kartaa bakaylaha ka baxsan koofiyadaha iyada oo la ilaalinayo saqafka deynta hoos yimaada ...
Suuqa Suuqyada iyo Suuqa ayaa ka baxaya
Sep 8, 11 • 3309 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off suuqa Suuqa Giveth iyo Suuqa Soodejinta
Tan iyo markii bangiga qaran ee Switzerland uu 'soo saarey' dhowr is-dhaafsi ganacsi ah oo ay go'aamiyeen in ay 'saameyn ku yeeshaan frank', labada jinsiyadood ee CHF waxay ahaayeen kuwo aan la isku halleyn karin. Xitaa laga bilaabo booska suurtogalka ah ee aragtida ganacsiga lacag badan ...
Swish ee Switzerland
Sep 7, 11 • 8939 Views Faallooyinka Suuqa • 2 Comments
Ereyga cusub ama loo cusbooneysiiyay ee ku saabsan mashaakil kasta oo dibedda ah ka dib markii uu qarxiyo foornada maalintaa, (oo lagu bixiyo hagid sax ah oo laysku yiraahdo baanka dhexe ee Swiss), waa "lacagaha dagaal". Markii hore ereyadan waxaa loo qoondeeyay sidii loogu talo galay ...